Kaningi empilweni yansuku zonke sibhekene a eside ezifana-copyright. Ake sibone ukuthi iyini.
Kusukela iphuzu inhloso umbono, i-copyright - uyilungiselelo civil, ulawula ubudlelwane ehlangene ukuqashelwa nokuvikelwa wombhali. Kunezinye ukutolika.
Ngomqondo subjective kuyinto amalungelo avikelwe ngokomthetho we umbhali we imisebenzi yobuciko, izincwadi kanye nesayensi, okungukuthi, ukuthi badalwa inqubo umsebenzi wokudala.
Izikhonzi abalobi-copyright futhi abanikazi bamalungelo angasebenza.
Umbhali - kushiwo umuntfu lophilako, abamizamo esedale omuhle wobuciko, izincwadi zezinkondlo, isayensi kanye nezinye empahla.
Owesilisa owatholakala ngumlobi, kuyinto uhla egcwele copyright etholakalayo.
Imininingwane Umnikazi - umuntu wemvelo noma womthetho ngubani ngokomthetho ungumnikazi we-copyright. Futhi ungaya ke ngenxa yezimo ezihlukahlukene.
Kungani kufanele ukuhlukanisa phakathi imiqondo le?
Umbhali kuyinto yimuphi umuntu okwaziyo ukwakha okuthile inqubo umsebenzi wokudala (ebhaliwe incwadi, wavula insimu entsha isayensi, njll).
Umnikazi zomthetho, kuyobe kungabi umlobi. thina unamalungelo okukhulunywa zifike kuye ngesivumelwano somhlaba, isimiso. Ngokwesibonelo, abasakazi ahlukahlukene angakuthola amalungelo okukhethekile ukuze ukusetshenziswa kwanoma yiluphi ulwazi ukusakazwa yayo.
Ngakho, umlobi ngamunye unegunya, kodwa akuzona zonke umnikazi kwezomthetho - umlobi.
amalungelo subjective amaqembu zomthetho
Ngokuhambisana nomthetho, i-copyright zingahlukaniswa zibe kwezomnotho kanye zokuziphatha.
Lezi zingozi zihlanganisa ama amalungelo alandelayo:
phezu ukuqashelwa ngokomthetho wombhali maqondana nomsebenzi wakhe;
egameni (okungukuthi, ithuba ukushicilela imisebenzi yabo ngokusebenzisa kokubili igama lakhe siqu futhi mbumbulu);
Isimemezelo mahhala futhi evulekile imisebenzi yakhe isibonisi;
ukuvikela isithunzi nedumela umlobi.
amalungelo ngokokuziphatha nangokomthetho, njengoba umthetho, phakade.
Kuhle kokusho ukuthi zisebenza kuphela abantu zemvelo, okungukuthi, ukuba abalobi. Abaphathi bamalungelo futhi akufanele bathembele kuleso amalungelo anjalo.
Iqiniso lokuthi leli ingaba njengesihluthulelo abantu nezinhlangano ezingokomthetho. Leli qiniso waphinda ligcizelela ukuthi umnikazi welungelo - akusona nombhali umsebenzi.
Qhubekisa ngokuthwebula ngqo amalungelo endawo. Lezi zihlanganisa:
ilungelo ukusatshalaliswa mahhala futhi zomthetho;
ukukhombisa umkhiqizo futhi ekwakhiweni impahla (ephepheni, enezithombe alalelwayo video format, njll);
yokungenisa amakhophi imisebenzi ngenjongo ukusatshalaliswa okunye (lapha yilawo ukushicilelwa kwagcizelela umnikazi we-copyright kwemvume);
ukwenza izenzo ezahlukene maqondana asiwona okuphambene nemithetho kanye umqondo womunye okukhethekile (translation, ilungiselelo, ukucutshungulwa original).
Izifundo zokusabalalisa amalungelo aphathelene nempahla kokubili izinhlangano ngokomzimba futhi esemthethweni, ie abalobi, abanikazi bama-copyright.
Lamalungelo yena, usunayo i term: ngokuvumelana sihloko 1281-th we Code Civil (esifushanisiwe kusukela "Russian Federation Civil Code"), impahla zenzeka ekuphileni noma khona kwenzeka umnikazi welungelo, futhi nikwenza iminyaka engamashumi ayisikhombisa ngemva kokufa kwakhe noma nokuqedwa kwenhlangano.
Uhlu imikhiqizo kungenziwa ngokuthi ngale ndlela, ebekwe sihloko 1259-th we Code Civil. Ngokusho okuqukethwe yayo ngaphansi kwe-copyright ingaze yakho konke lokho okuye etholwe ngenxa yomsebenzi okudala nokuhlakanipha.
Izinhloso copyright ayibonwa:
imibhalo esemthethweni, eyabonakala ngenxa imisebenzi zikahulumeni;
izimpawu kanye nezimpawu wombuso kanye nezinye izinhlangano zomphakathi (izifanekiselo, imiklomelo, zemali futhi izimpawu, njll);
Izinganekwane (umkhiqizo etholakalayo ngaphandle ecacisa umbhali, kwakhiwa ngokuvamile abantu isiko noma isiko);
umkhiqizo eziveza zokwaziswa kuphela (enamathiselwe izinto Umhlahlandlela, lwezikhathi amabhasi, njll);
Ngaphezu kwalokho, njengoba izinto copyright hhayi ingaba njengesihluthulelo imibono nemicabango, izindlela yokuqala ekufezeni izinhloso zokuzibandakanya nokuxazulula izinkinga, kanye nezinye izilimi izinhlelo.
Ngokwemvelo, lokhu kusho umnikazi welungelo - iyona inhlangano kuphela lapho umkhiqizo fanele. Kodwa zikhona izikhathi lapho evikela amalungelo ubuqambi kunzima ngenxa yokuthi umuntu nje ubufakazi obanele ukuthi, ngaphezu kwakho konke, kumele zenziwe ngokomthetho.
Uqinisekisa ukuvikelwa copyright ngezindlela eziningana.
Usizo umphakathi ummeli olungisa izivumelwano. Kulokhu, into yokuqala umkhiqizo udluliselwa yenethiwekhi impahla (iphepha digital), khona-ke kubalulekile ukuze siqinisekise (le nqubo akuyona free, kumelwe acabangele wamalungelo).
Shicilela umsebenzi kunoma imuphi umthombo (isibonelo, umlobi wabhala inkondlo kungaba inyatheliswe kumagazini noma agqoke portal inthanethi).
Thumela i-imeyili kuwe, kuthi lapho ngifika kwakhe akazange ukuvula imvilophi. Abameli cabanga ukuthi umnikazi malungelo Ukuvikelwa ngokusebenzisa iqhinga - enokwethenjelwa kakhulu.
Ukuze isaziso third-party ukuthi mkhiqizo uvikelwe kusukela umqondo womunye, ungakwazi iphendukele ukusetshenziswa isibonakaliso esikhethekile zokuzivikela, okuyinto Latin incwadi «C» kumbuthano.
Kwamanye amazwe, umlobi, welungelo kungenzeka bajeza ukusetshenziswa uphawu ngesizathu esilula ukuthi libhekisela ulwazi ayihambisani ngokoqobo.
Silindele ijubane umsindo e km
Indlela ukudweba ikhathuni Sponge Bob ku Nickelodeon
Indlela yokwenza unodoli indwangu? Indlela yokwenza unodoli ngezandla zakhe ekhaya